MUQDISHU- Xildhibaan katirsan Barlamanka Somalia, ayaa caawa fiidkii ka bad-baaday weerar lagu soo qaaday gurigiisa oo ku yaalla xaafadda Hodon ee magalada Muqdishu.
Weerarkan, ayaa loo adeegsaday bambaano gacanta laga soo tuuray, waxaana falkaasi ku dhaawacmay 4 qof oo la sheegay inay dhammaantood katirsanyihiin ilaaladda Xildhibaanka oo lagu magacaabo Aadan Ibrahim Dhaayoow.
Qaraxa bambaanada kadib, waxaa rasaas furay ciidamadii goobta ka sugnaa.
Ilaa hadda lama garanayo haybta kooxda weerarka soo qaaday, balse waxaa la xaqiijiyay inuu Xildhibaan Dhaayoow bad-qabo, dadkii dhawacmayna loo qaaday xarumaha caafimaadka.
Weerarada caynkan, waxaa inta badan ku caan ah kooxda Shabaab, kuwaasi oo beegsada mas'uuliyiinta iyo hal doorka bulshada.
​Muqdishu: Qarax ka dhacay Hotel Ambasador
Soomaliya 01.06.2016. 18:48
MUQDISHU- Weerar xooggan ayaa casar gaabkii lagu qaaday hotelka Ambasador oo ku yaalla magalada Muqdishu caasumadda Soomaaliya, waxana u dhacay qaab ismiidaamin ah iyadoo qaraxa kadib mallayshiyaad hubaysan ugaha u galeen hotelka.
Weerarkaasi, waxaa ka dhashay ...
​Qarax ka dhacay nawaxiga xarunta gobolka Banaadir
Soomaliya 11.04.2016. 13:40
​Somalia: Wasiir ka bad-baaday weerar [Dhagayso]
Soomaliya 08.08.2016. 11:33
Somalia: Faahfaahinta Khasaaraha Qaraxa Muqdishu
Soomaliya 09.04.2016. 13:57